जो एप्पल मैकबुक ल्यापटप म किन्न गर्नुपर्छ? - समाचार नियम
मेरीको प्रतिस्थापन गर्न आवश्यक 2009 मैकबुक प्रो तर विकल्प बढ्तै छ. जो सबै भन्दा राम्रो विकल्प छ?
शीर्षक यो लेख “जो एप्पल मैकबुक ल्यापटप म किन्न गर्नुपर्छ?” ज्याक Schofield द्वारा लेखिएको थियो, लागि बिहीबार 15 नोभेम्बर मा theguardian.com 2018 10.00 UTC
म एक साथ मा soldiered छ 2009 मैकबुक प्रो, जो म इन्टरनेट पहुँचका लागि प्रयोग, सामाजिक संजाल, फोटो, र मेरो अनुसन्धान. तर विश्वविद्यालय पुस्तकालय टाढैबाट पहुँच गर्न, म एक अप-टु-मिति अपरेटिङ सिस्टम प्रयोग गर्न, र मेरो म्याक म अब यो अद्यावधिक गर्न सक्नुहुन्छ त पुरानो छ.
त्यसैले, म एक नयाँ मैकबुक खरीद गर्न आवश्यक, तर म विकल्प बढ्तै छु. म एक टच पल्ट चाहिन्छ? कति स्मृति र SSD म चाहिन्छ? मरियम
निम्न उत्पादन ताजा 30 अक्टोबर, स्याउ धेरै नै काम गर्न भनेर चार MacBooks छ. राम्रो समाचार छ, तपाईं एक मा बच्न सक्नुहुन्छ भने 2009 मैकबुक प्रो, तिनीहरूलाई कुनै पनि आफ्नो उद्देश्यका लागि राम्रो हुनेछ. खराब समाचार तिनीहरू सबै तिनीहरूलाई खरीद मलाई पन्छाउन भनेर सुविधाहरू छ कि छ, हुनत, भाग्य संग, तिनीहरूले आवश्यक बन्द तपाईं गर्नेछन्.
तथापि, म यो तपाईं कम्तिमा तुलना गर्न सक्छन् भनेर एउटा एप्पल स्टोर वा अन्य stockist छ भ्रमण गर्न आवश्यक छ लाग्छ छेउमा दुई 13in MacBooks पक्ष. यी पुराना मैकबुक एयर छन् (सबै भन्दा राम्रो किबोर्ड, खराब स्क्रिन) र मैकबुक प्रो (भयानक किबोर्ड, ठूलो पर्दामा).
म तपाईंलाई बताउन सक्छन् जो चिप्स छिटो हो, र यति मा, तर आफ्नो व्यक्तिगत अनुभव किबोर्ड र स्क्रिनको गुणस्तर प्रभुत्व हुनेछ. ब्लग पोस्ट तपाईं जो व्यक्तिहरूलाई तपाईंलाई रुचि छैन बताउन सक्नुहुन्छ, वा तपाईं कहाँ समझौता गर्न रुचि थियो.
सबै नयाँ म्याक ल्याप्टप एप्पल गरेको कम यात्रा पुतली किबोर्ड साथ, जो फूट ल्याउने सिद्ध छ. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
मलाई लागि, नयाँ MacBooks संग सबै भन्दा ठूलो समस्या पुतली किबोर्ड छ, जो पहिले संग शुरू भएको थियो 12मा मैकबुक मा 2015. दोस्रो संस्करण मैकबुक पेशेवरों मा देखा, प्रयोगकर्ताहरूको संख्या थियो जहाँ किबोर्ड असफलता कारण धूलो वा detritus साँचाहरू अन्तर्गत रही. नवीनतम MacBooks बाहिर धूलो राख्न अतिरिक्त छाप संग तेस्रो संस्करण. हामी कसरी यो समय अप खडा हेर्न अझै छ.
देखि अलग, म पुतली किबोर्ड एक भयानक टाइप अनुभव प्रदान गर्दछ फेला. म टाइपराइटरमा मा टाइप स्पर्श गर्न सिकेका, र म यात्रा धेरै संग यांत्रिक कुञ्जीहरू संग कीबोर्ड रुचि. पुतली कुञ्जीहरू लगभग कुनै यात्रा छ. यो मलाई पुरानो मैकबुक एयर तिर धक्का हुनेछ, जो ल्यापटप स्तरअनुसार एक धेरै राम्रो किबोर्ड छ.
दुःखको कुरा, पुरानो मैकबुक एयर अन्य समस्या छ. खासमा, टच प्याड र स्क्रीन मा व्यक्तिहरूलाई भन्दा झन् खराब हो नयाँ मैकबुक एयर. (तिनीहरूले खराब हुनुहुन्न, तर तिनीहरू राम्रो छैन।)
खुसीको कुरा, स्वाद फरक. केही मानिसहरू समतल रुचि, अनुत्तरदायी कीबोर्ड, र तपाईं पुतली किबोर्ड जस्तै तपाईं पाउन सक्छ. त्यसो भए, यसलाई आफ्नो रुचि सजिलो बनाउँछ. म सिर्फ तपाईं यसलाई गम्भीर गो दिन आवश्यक लाग्छ - यो एक सय केही शब्द टाइप - तपाईं सबै दिन हरेक दिन यसको प्रयोग ... वा वरिपरि बाह्य USB किबोर्ड पूरा गर्न प्रतिबद्ध अघि.
स्पर्श पल्ट? के छैन
स्पर्श पल्ट को मैकबुक Pro मा फा कुञ्जीहरू प्रतिस्थापन. तस्वीर: रक्षक लागि शमूएल गिब्स
तपाईं एक टच पल्ट आवश्यक छैन. वास्तबमा, कुनै एक साँच्चै टच पल्ट आवश्यक. या त बाटो, तिनीहरूले मात्र अधिक महंगा मैकबुक पेशेवरों गर्न सज्जित छन्, र म तपाईंलाई आवश्यक भन्दा धेरै महंगा मैकबुक खरीद रुचि हुनुहुन्न मान.
यो 13मध्य-2009 मैकबुक प्रो मा एक इंटेल कोर थियो2जोडी प्रोसेसर, जो आज स्तरअनुसार दयनीय छ. आधार मोडेल मात्र स्मृति 2GB थियो (8GB गर्न विस्तार) र एक 160GB हार्ड ड्राइभमा, अनुकूलन अपग्रेड 128GB र 256GB SSDs समावेश हुनत. तपाईं आज किन्न सक्नुहुन्छ lowliest मैकबुक राम्रो विनिर्देशों हुनेछ.
दुर्भाग्यवश, तपाईं आजको MacBooks अपग्रेड गर्न सक्दैन, ताकि तपाईंले कहिल्यै आवश्यक हुनेछ रूपमा धेरै शक्ति किन्न छ. दीर्घायु लागि, यो स्मृति 16GB र एक 256GB वा ठूलो SSD छ राम्रो हुनेछ, तर एप्पल यी अपग्रेड लागि एक विशाल प्रिमियम शुल्क.
खुसीको, MacBooks एकदम राम्रो आफ्नो मूल्य पकड, त्यसैले वैकल्पिक आधार कल्पना लागि जाने छ र, तपाईं थप शक्ति आवश्यक भएमा तपाईँले फेला, यसलाई बेच्न र एउटा नयाँ किन्न.
यस macbook इंटेल गरेको कम शक्ति प्रोसेसर प्रयोग. तस्वीर: एप्पल
तपाईंको सम्भव MacBooks को दुई मा एक गैर-स्पष्ट समस्या इंटेल कोर एम प्रोसेसर गरेको छ, राम्रो ब्याट्री जीवन प्रदान गर्न गति मा जो समझौता. स्याउ पहिलो प्रयोग 1.1GHz दोहरी-कोर एम-5Y31 चिप यो प्रयास 2015 मैकबुक (12स्क्रिनमा). आज, कोर एम चिप्स मात्र होइन 12in MacBooks प्रयोग गरिन्छ, तर पछिल्लो मैकबुक Airs मा पनि.
इन्टेल यसको नामकरण योजना परिवर्तन किनभने यो स्पष्ट छैन. को "कोर एम" पदद्वारा पन्छाउन सक्छ जसले गरिएको मान्छे शायद उनि एक वाई श्रृंखला चिप रही याद छैन - विशेष, एक कोर i5-8210Y - सट्टा थप शक्तिशाली यू श्रृंखला मुख्यधारा ल्याप्टप प्रयोग चिप्स को.
म कोर एम / वाई श्रृंखला चिप्स विरुद्ध केही छ, र मेरो 8GB / 128GB स्पर्श-स्क्रिन लेनोभो योग 700 एउटै कोर M3-6Y30 केही MacBooks प्रयोग गरेको छ. फरक यो आकस्मिक / छुट्टी प्रयोगको लागि एक मेसिनको छ, मेरो मुख्य प्रणाली र यो मेरो मात्र खर्च £ 339,99. म मेरो मुख्य मिसिन रूपमा एक खरीद छैन, र एक लागि £ 1,200 चार्ज हास्यास्पद छ.
समय बढ्न सक्छ, जो - - एक कोर i5-8210Y तपाईंको ज्योति प्रयोग को लागि छिटो हुनुपर्छ तर यो अझै पनि एक मैकबुक एयर पैसा को लागि गरिब मूल्य छ.
स्याउ गरेको पुरानो मैकबुक एयर. तस्वीर: सिमोन Lees / भविष्य र प्रकाशन / REX
स्याउ पुरानो 13in मैकबुक एयर खुलिरहेको छ, र यो £ 949 मा पैसा को लागि सबै भन्दा राम्रो मूल्य देखिन्छ, यसको पाँचौं-पुस्ता कोर i5-5350U प्रोसेसर र गैर-रेटिना स्क्रिन बावजुद. यो संग, मेरो विचारमा, सबै भन्दा राम्रो किबोर्ड, र यो अझै पनि राम्रो पुरानो जमानाको बंदरगाहों छ, SD कार्ड स्लट र एक magsafe कनेक्टर सहित. In all other respects, the new MacBook Air (2018) is far superior.
The new 13in MacBook Air is smaller and lighter than the old version, hasafar superior screen,abigger force-touch trackpad, and better speakers. It’s also more expensive at £1,199. को कमियां को पुतली किबोर्ड र कोर एम / वाई श्रृंखला प्रोसेसर समावेश.
अन्तमा, त्यहाँ बिना टच पल्ट को 13in मैकबुक प्रो छ (मध्य-2017), जो छिटो सातौं-पुस्ता 2.3GHz कोर i5 प्रदान (7360को) प्रोसेसर, धेरै राम्रो ग्राफिक्स र अतिरिक्त £ 50 को लागि राम्रो रंग प्रतिपादन, अर्थात् £ 1.249. प्रो पनि एक उज्जवल स्क्रिन छ - 500 सट्टा लीख s 300 लीख s - आउटडोर प्रयोगको लागि धेरै राम्रो हुनुपर्छ जो. तपाईं एयर गरेको वेज आकार गुमाउनु, जो टाइप लागि थप सहज छ, तर प्रो नयाँ एयर भन्दा एकदम भारी छ (1.37किलो बनाम 1.25kg).
यो पुरानो एयर किबोर्ड थियो भने म मैकबुक प्रो थप चाहन्छु, तर यो मलाई देखिन्छ यो सबै भन्दा राम्रो खरीद छ - तपाईं यसलाई किन्न सक्छन् भने. म पनि यो भविष्यमा सञ्चालन प्रणाली अपडेट लागि आफ्नो सबै भन्दा राम्रो शर्त छ लाग्छ.
अपग्रेड छन्, उल्लेख रूपमा, महंगा. 16GB गर्न स्मृति को प्रो गरेको 8GB वृद्धि £ 180 लागत, र 256GB गर्न 128GB SSD अपग्रेड £ 200 लागत, त्यसैले तपाईं साँच्चै चाहेको कल्पना लागत £ 1.629. थप्दै AppleCare £ 1.878 गर्न अन्तिम मूल्य माथि धक्का.
यो पैसा धेरै छ, तर यो पाँच वर्ष £ 1 रूपमा एक दिन लाग्छ र यो यति खराब महसुस छैन.
एक स्नातक विद्यार्थी रूपमा, तपाईं एक शैक्षिक छुट लागि योग्य हुनुपर्छ, जो तल मूल्य ल्याउनेछ. पत्ता लगाउन यो आफ्नो विश्वविद्यालय मार्फत यो गर्न सबै भन्दा राम्रो छ कि छैन भनेर जाँच, अनलाइन, वा एप्पल स्टोर मा.
स्याउ पनि पुरानो उपकरण मार्फत मा व्यापार-इन्स प्रदान गर्दछ यसको फिर्ता दिनुहोस योजना. म तपाईं आफ्नो मैकबुक प्रो सिरियल नम्बर बिना प्राप्त चाहन्छु कति छैन बताउन सक्नुहुन्छ. यो एक धेरै छैन शायद छ, तर पुरानो warhorse कम्तीमा ठीक साफ प्राप्त हुनेछ.
10436	3 जो एप्पल मैकबुक ल्यापटप म किन्न गर्नुपर्छ?
← OnePlus 6T समीक्षा यो 20 को सबै भन्दा राम्रो ग्याजेटहरू 2018 →